उग्रतारा माताको दर्शन गरी हेर्नुस् २०७८ साल असोज २४ गते आइतबारको राशिफल ! | सुदुरपश्चिम खबर
उग्रतारा माताको दर्शन गरी हेर्नुस् २०७८ साल असोज २४ गते आइतबारको राशिफल !
नयाँ कामको थालानीको लागि प्रेरणा मिल्ने छ । मनमा स्थिर नहुनाले काममा समास्य आउन सक्छ। नोकरी तथा व्यसायमा प्रतिस्पर्दात्मक वातारण हुनेछ । भाइ बहिनि संगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ । बिभिन्न क्षेत्रबाट लाभ हुने योग छ । स्त्री जातिको लागि बोलिमा बिशेस ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
दिमाखको अशान्तिपूर्ण मनोवृत्तिले तपाईलाई महत्त्वपूर्ण अवसरहरूबाट बञ्चित हुन् सकिन्छ । नयाँ कार्यको थालानिको लागि खासै उचित हुदैन । कसैसंगको कुराकानीमा तपाईको व्यर्थको व्यवहारले विवाद उत्पन्न हुन् सक्छ ।
भोलोको दिन तपाइको निकै जोश जागरको साथ बित्ने छ । नयाँ बस्त्र प्राप्त हुनुको साथै भोज तथा समारोहमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा आनन्द र सन्तुष्टि को अनुभव गर्नुहुनेछ। आर्थिक लाभहुने कार्यको थालनीको लागि शुभ समय रहेको छ । खर्च बढ्ने हुदा बिशेस ध्यान दिनु होला ।
पारिवारिक मनमुटाव हुन् सक्छ । तेसैले मानशिक चिन्ता बढ्न सक्छ । मनमा दुबिधा बढ्ने हुदा महत्वोपूर्ण निर्णय नलिनु होला। वाद–विवादमा फस्ने योग हुदा झैझगडा बाट टाढा रहनु होला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने हुदा बिशेस सावधानी अपनाउनु होला । मुद्धा मामिलामा बिचार गरेर मात्र निर्णय लिनु होला । मानहानि र धनहानि हुने सम्भावना भएको हुदा बिशेस सावधानी अपनाउनु होला ।
भोलिको दिन तपाइको लाभ दाएक हुनेछ । मनमा असान्ती छाउनाले हातमा आइसकेको अवसर पनि गुम्न सक्छ । तेसैले बिशेस सावधानी अपनाउनु होला । स्त्री जाति संगको भेट लाभदएक हुनेछ। परिवारमा मांगलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ। व्यापार क्षेत्रमा व्यापार वृद्धि हुनेछ । बैदिशिक यात्रा हुनसक्छ ।
नया कार्यको योजना सम्पन्न हुनेछ । बुबासँग आत्मीयता बढ्नेछ। धन, सम्मान सम्मान बढ्नेछ। सरकारी क्षेत्र बाट लाभ हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । परिवारमा शुख सान्ति छाउनेछ । व्यापारको लागि बाहिर जाने योग बनेको छ । नोकरीमा पद बढ्ने छ ।
बौद्धिक वा साहित्य प्रेमीहरूसँग भेट हुनेहुदा तपाईं ज्ञान गोष्ठीहरूमा समय बित्ने छ । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । लामो दूरीको यात्रा वा तीर्थ स्थानहरूको भ्रमण गर्ने योग छ । विदेश बस्ने मित्रको शुभ समाचार सुन्न पहिने छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । सन्तानहरुको समस्याका कारण चिन्ता उत्पन्न हुनसक्छ।
बोली र व्यवहारमा संयम राख्नु उचित हुनेछ । दैनिक कार्यको साथै नयाँ कार्यहरू गर्नु पनि राम्रो हुदैन । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । खान पानमा बिशेस ध्यान दिनुहोला । अचानक धन लाभ हुनसक्छ । आध्यात्मिक अभ्यासको लागि राम्रो समय रहेको छ । मानशिक शान्तिकोको लागि बिभिन्न उल्झन बाट टाढा रहनु होला ।
पिकनिक तथा पार्टीमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । दिन मनैरंजनमा बेतित हुनेछ । बिपतित लिंगी संगको भेट रमाइलो हुनेछ । दाम्पत्य जीवन शुखामय बित्ने छ । सार्वजनिक सम्मान र प्रसिद्धि प्राप्त हुने छ । सहभाती भएको स्थान बाट लाभ हुनेछ।
व्यापारको विकास र आर्थिक योजनाका लागि उपयुक्त दिन रहेको छ । आर्थिक लेनदेनको लागि दिन शुभ रहेको छ । परिवारमा खुशीको वातावरण हुनेछ।आर्थिक लाभ हुनेछ। कानुनि समस्यामा सावधान रहनुहोला । सत्रु पराजित हुनेछन् ।
मानिशिक तनाव बढ्नेछ । मन स्थितनहुदा सहि निर्णयलिन मुस्किल हुनेछ । सन्तानको प्रश्नले समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । पेट सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । हतारमा गरेको कार्यले असफलता प्राप्त हुन सक्छ । आकस्मित धन नोक्सान हुनसक्छ । साहित्यमा रुची राख्नेको लागि दिन अनकुल हुनेछ ।
परिवारक सदस्यसँग मदभेद हुनसक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । दिन उदासमाया हुनसक्छ । नोकरीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ। स्त्रीजाति सँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । कतैजादा तपाइको मान तथा धनमा आच आउन सक्नेहुदा सचेत रहनुहोला ।